Lisho ukuthini igama elithi "umhlatshelo", okusho ukuphila ezimweni neqhaza ukuvela umuntu onjalo, futhi uyini Psychology yalolu hlobo lwabantu. Lokhu nokunye okuningi kungatholakala kulesi sihloko.
Meaning of igama elithi "isisulu"
"Victim" - ku Dictionary isiRashiya Ozhegova kusho noma yini walethwa unkulunkulu njengesipho (ophilayo, yisiphi isihloko), noma ukunikezela isipho onkulunkulu. Kwenye indlela linikezwa njengomhlatshelo.
Enye incazelo - ukwenqaba ngothile noma ngokuthile bese bekhetha omunye. Kubonakala sengathi umhlatshelo.
okufana wesithathu elithi "isisulu" - umuntu noma yimuphi izidalwa eziphilayo abathwele ukuhlupheka ukwehluleka, usizi ubudlova (abayizisulu zobudlova, inhlekelele, izakhi, njll).
Lokho kusho isisulu - ukuzama ukuthola ukuthi, njengokuba nazi okushiwo Psychology isisulu, indima izethameli nabantu bakhe.
Ingqikithi Psychology lohlaselwayo
Inzwa ebaluleke kakhulu bezikhali isisulu iwukuthi bayesaba. Emvelweni, njalo umzimba uzizwa ngendlela ehlukile kulesi simo. Chameleon kushintsha umbala walo, ukukhanya kanye shades umbala imvelo, yiqhwa izinyamazane, amvalele e shell unkom 'idlayodwa yayo crab, skunk Ufaka kakhulu ketshezi esinuka kanye nento encimfelwayo ikati, isiyaphuma emuva kwakhe.
Futhi iyini Psychology isisulu-indoda?
Umhubi wasabela kanjani lapho sibhekene nesimo esiyingozi? Lahleka, uzama ayibulale, izikhumba, uyabaleka, uthola ukulungisiswa yayo noma uzenza ukuthi akanandaba?
Isisulu - kuyini? Kulesi simo isikhundla isisulu ezingalindelekile futhi eziqondile. Ngo Psychology, kukhona section ekhethekile - victimology ( "CGIL" lihunyushwe kwelesiHeberu elithi ngesiNgisi "isisulu").
Sekuyisikhathi eside izazi zokusebenza kwengqondo wangabaza ukuthi inani kungenzeka izigebengu ngabanye futhi uyini Psychology izisulu. Ngokusho izindaba eziningi zemizimba okuphenya, abahluleli kanye yicala, kubonakala ukuthi izisulu futhi babe izici ezithile ezivamile - kokubili ukuziphatha futhi isitayela ukucabanga.
Ubani olandelayo samanje ukuba isisulu?
Kunoma yikuphi ukushayisana zikhona njalo ezintathu indima-isikhundla bahlobene. Isisulu ngeke kube khona kungekho omunye omele.
Kwenzekani lapho nje njengoba beqala ukuhlanganyela? Yiqiniso, nakhona livela eyesithathu - hero-umsindisi, ubani ozama ukuvikela ukuhlasela le ngozi. Le ndaba kuvamile inganekwane.
Kodwa inganekwane njalo okubi kweqiniso sihlawuliswa, isisulu is avuselelwa noMsindisi abathobekile yahamba. Futhi wonke umuntu ufundile noma ubuke indaba uyaqiniseka ukuthi uhlamvu lokugcina nganoma yisiphi isikhathi ukuze ubuye futhi zisize zonke "ezinhle" ukujezisa "okubi". Kulula.
Kwenzekani ku zangempela izimo?
Okunjalo Ngumhlatshelo inganekwane. Kuyini empilweni yakho? Kukhona kuyaqabukela ilula kangaka ngalokuvakalako. kakhulu Uzungu zivela ngalesikhathi umzabalazo phakathi kokuhle nokubi ngokuvamile kuphakama emphakathini abasizungezile ezimweni zansuku zonke. Kodwa ke ngamunye amaqembu impikiswano, njengoba umthetho, uyaqiniseka ukuthi kuyinto enhle kakhulu, ukuthi isisulu ngeshwa sokuhlaselwa engenabulungisa.
Elinye ilungu ukuba impikiswano udlala indima okubi, futhi esimweni engcono - okwathi ngenxa yokungazi, kahle, kanti okubi - zonya ngamabomu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi indima villain kungaba hhayi nje umhlaseli ethile, futhi isibonelo, imithetho "okungalungile", ukwaziswa okungafani, imikhiqizo yekhwalithi ephansi, ukukhangisa ezikhohlisayo nokuningi okunjalo.
Futhi hhayi umsindisi ngesimo esihle inganekwane inganekwane, nje sihloko kothile onegunya, ummeli, udokotela, isazi sokusebenza kwengqondo, iphoyisa, wengqondo, "inkantolo" abangane nomndeni noma ngezibhakela nje umxhwele.
Kungani-ke ngezinye izikhathi kuzuzisa ukuba indima isisulu?
Ngezinye izikhathi inzuzo isisulu. Uyini lowo mthombo ngoba inzuzo? Kuyindida kodwa ngokuba endaweni lohlaselwayo (noma nje bembonisa yena indima ezinjalo a) Ngezinye izikhathi kuzuzisa.
Kwenzeka ukuthi zikhona izinkinga ezivimbela umuntu lokho akufunayo. Futhi kukhona inkinga yokuthi akusizi lokho akufunayo. Kuyinto kakhulu inzuzo (zesibili).
Izibonelo singenamandla sobala
Ngokwesibonelo, uma othile esandleni sanoma yikuphi ukulimala (eczema, isibonelo), lokhu ke izaba ephelele hhayi ukugeza izitsha naphakade.
Noma, bathi, 'Uma owesifazane - umama onezingane ezintathu, esikhathini esizayo esiseduze (eminyakeni embalwa), kungenzeka ukuba ungakhathazeki mayelana nezinkinga zokukhula umsebenzi.
Kunezimo ezinengi ezinjalo.
Kwabaningi, ukukhathala futhi singenamandla yizizathu ezizwakalayo ukuba bafake izicelo zosizo unomphela (kakhulu ngempumelelo Kwenzekani lapho umuntu ecabanga ukuthi nje ngoba ngeke bakwazi ukuthola usizo).
Izinkinga emsebenzini bathethelele amaholo aphansi noma ukushayisana nabathandekayo babo.
Ukukhathazeka abazali asebekhulile akuvumeli umuntu sokushiya ikhaya labo ubhekane nezinselele zo- abaphilayo ozimele.
Yona kanye izimo ezenza ukuvela izizathu (kodwa hhayi yonke ngokunenzuzo le) ngoba umsuka indoda yokuma "isisulu". Yini ebangela le nkulumo - impendulo sitholwa.
Yingakho abantu abaningi, futhi abambelele singenamandla nobumbi angafuni basindiswe zomunye umuntu. Ngakho bahlala ngabo isimo sikuvumela.
Lisho ukuthini "Russian Iqiniso" Pestel?
Amaqiniso ezithakazelisayo kakhulu mayelana Georgia
Umlingisikazi "Isikole" Tatiana Shevchenko (intombazane emo Melania)
Umlando kweSoviet imoto umkhakha. Microcar "FDD"